Iindaba zesiXhosa, 27 eyoKwindla 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 27 eyoKwindla 2019
Written by Ashia Nkontsa on 27/03/2019
Izakuqhuba intetho yolwabiwo mali lwoVoto namhlanje
Ngamasebe amabini angundoqo karhulumente wephondo leNtshona Koloni azakuthi thaca intetho yevoti yohlahlo-lwabiwo mali namhlanje epalamente. Umphathiswa wesebe lezemfundo unkosikazi Debbie Schafer uzakuchaza eyona miba iphambili ifuna ingqwalasela kwakunye nendlela ezakwabiwa ngayo imali kunyaka-mali ka2019/20. Ukanti naye umphathiswa wophuhliso lentlalo yoluntu umnumzana Albert Fritz uzakuzeka mzekweni. USchafer uthi uzakugxila ekuqinisekiseni ukuba abafundi beli phondo bafumana imfundo ekwizinga eliphezulu ingakumbi abo bahlala kwiindawo ezihlelelekileyo. Uthi kuzakunikezelwa ngenkxaso-mali ethe xhaxhe kwizikolo zikarhulumente,inkqubo yesondlo sabafundi kwakunye nothutho lwabafundi. Ezinye zezinto eziphambili lukhuseleko labafundi,izakhiwo kwakunye neenkqubo zeemfuno ezikhethekileyo. Kusenjalo isebe lophuhliso lentlalo lithi lizakugxila ekwandiseni amaziko ophuhliso lwabantwana beselula,ukwandisa iinkonzo zabantu abaphila nokukhubazeka,ukuxhaswa kwamaxhoba kwkaunye nophuhliso lolutsha.
Uvumile uNyaka kaMongameli ngezigidi zemali wazifumana kuBosasa
Unyana kamongameli Matamela Cyril Ramaposa uAndile, uvumile ukuba inkampani etyholwa ngorhwaphilizo i-Bosasa yamhlawula izigidi ezimbini zeerandi kwisivumelwano sezoshishino. Uthi uyazisola ngokuba nesi sivumelwano nale nkampani kwaye zikho iimpawu zezenzo gwenxa angazange aziqwalasele kakukuhle phambi kokuvuma ukutyikitya esi sivumelwano. Ngenyanga yoMnga kunyaka ka2017 inkampani yakhe i-Blue Crane Capital yatyikitya isivumelwano neBosasa, nalapho yayifumana isixa senyanga nenyanga sezigidi ezilikhulu elinamashumi amahlanu zeerandi nesithe senyuswa saya kuma kumawaka angamakhulu amabini anamashumi amathathu eerandi.
Kubanjwe kwavalelwa umqhubi oneminyaka engamashumi amabini
anethoba ubudala kwindlela endala i-Paarl eBellville cebu kuhle eKapa ngentsasa
yanamhlanje emva kokufunyanwa emva kwevili ezitshize ngobhelu lomsele. Usomlomo
wecandelo lezendlela kwiphondo leNtshona Koloni umnumzana Richard Coleman uthi
le taxi ibithwele abantu abalishumi elinesixhenxe. Uthi ibivela eKraaifontein
Buphumile ubungqina betyala le Ford Kuga
Banikezele enkundleni ngobungqina kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo abantu abazibonele ngamehlo isithuthi sohlobo lweFord Kuga SUV sivutha eWilderness kuMzantsi Kapa kwisithuba seminyaka emithathu edlulileyo. UReshall Jimmy wabhubha ngethuba isithuthi sakhe sivutha ngumlilo ngelixa sisendleleni kwaye kuchotshelwe uphando kwinkundla ephakamileyo yaseKapa malunga nokubhubha kwakhe. Inkampani yakwaFord ithi igxeke alinakubekwa kuyo kananjalo igunyabantu lotshutshiso ligqibe kwelokuba lingatshutshisi. Le nyewe iyaqhubeka kwakho enkundleni namhlanje.
Impatho embi kubahlali basePaarl
Umbutho wophuhliso lwabantu abahlala emaphandleni kwakunye nabasebenzi basezifama usigxibhile isenzo sokukhutshwa ngetshova kwamalungu osapho alishumi kwifama esePaarl eBoland. IIngxelo zithi olu sapho lukhutshwe ngomvulo wale veki emva kokuba umnikazi wefama efumene isigunyasiso senkundla. Olu sapho luthi lufince iminyaka engamashumi amathathu anesixhenxe luhlala kule fama. Usomlomo weRural and Farmworkers Development Organisation umnumzana Billy Classen uthi akwamkelekanga ukugxothwa kwabantu abahlala kwiifama.
Umbutho we-Aboriginal Khoisan ugxininise ngelithi uzongenelela kulonyulo lwezoPolitiki
ZIgxwala ngokunga zinezigxala iinkokheli zombutho i-Aboriginal Khoisan Party ngelithi abantu abangamaKhosi namaSan belizwe loMzantsi Afrika benziwa amakheswa kwiingxoxo mpikiswano malunga nokuthatyathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Lo mbutho uthi uzakungenela ulonyulo jikelele lwalo nyaka osele lusemnyango, ngethemba lokuphumelela isihlalo kwindlu yowiso-mthetho yephondo loMntlaKapa ze usebenzise ifuthe lawo kumbandela womhlaba. Kulindeleke ukuba eli qela liphehlelele ngokusesikweni umqulu walo wezibhambhathiso.
UMphathiswa wezempilo welizwe loMzantsi Afrika umnumzana Aaron
Motsoaledi ubathethelele oogqirha ebebenceda owasetyhini obeyobeleka kwaza
kwaphuma intloko yodwa kuqala kusana lwakhe xeshikweni ebeleka. Kuvele imibuzo
yokuba bekungani oogqirha bengenzi uqhaqho olubizwa ngokuba-yi-Cesarian Section
ukubelekisa eli nenekazi xa beqaphele ukuba ambalwa amathuba okuphila kolu sana
nekubangwa ngelithi belineziphako eziliqela zomzimba. UKagiso Kgatla oneminyaka
elishumi elinethoba ubudala ugxeka isibhedlele iTambo Memorial
ngokungakhathali. Ukanti umphathiswa wezempilo uthi oogqirha banezizathu
ezibambekayo malunga nezigqibo zezempilo abazithabathayo…MOTSOALEDI…Uthi
usalinde ingxelo yangaphakathi kwisebe lezempilo lephondo leGauteng.